BGR - - Tele RELAY တစ်ခုနျူထရွန်ကြယ်ပွင့် '' ချို့ယွင်း '' သိပ္ပံပညာရှင်များသည်၎င်း၏အတွင်းပိုင်းအလုပ်လုပ်အကြောင်းသဲလွန်စပေးသည်
မူလစာမျက်နှာ » သိပ္ပံ "နျူထရွန်ကြယ်ပွင့် '' ချို့ယွင်း '' သိပ္ပံပညာရှင်များသည်၎င်း၏အတွင်းပိုင်းအလုပ်လုပ်အကြောင်းသဲလွန်စပေးသည် - BGR
BGR - နျူထရွန်ကြယ်ပွင့် '' ချို့ယွင်း '' သိပ္ပံပညာရှင်များသည်၎င်း၏အတွင်းပိုင်းအလုပ်လုပ်အကြောင်းသဲလွန်စပေးသည်
Tele RELAY တစ်ခု 15 သြဂုတ်လ 2019
နှင့်နားမလည်နိုင်လောက်အောင် - အာကာသအတွင်းလေ့လာမှုဝေးကွာသောအရာဝတ္ထုသည်ဤအရာဝတ္ထုမမျှော်လင့်ဘဲအမှုအရာဖြစ်စေစတင်အထူးသဖြင့်အခါ, နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များအတွက်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ နျူထရွန်ကြယ်များအာကာသနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်တွေအတွက် densest တ္ထုကောင်းကောင်းလုံလောက်စွာလေ့ကျင့်ရေးကျွမ်းကျင်ကြပါပြီဟုယူဆနေကြသည်။ သို့သျော "အေးခဲ" ရန်သို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲမြန်ပြုမူအချို့နျူထရွန်ကြယ်များ၏သဘောထားကိုမိမိတို့ခေါင်းပေါ်ကုပ်ခြစ်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ထားခဲ့တယ်။ ဝေးသောနျူထရွန်ကြယ်ပွင့်များ၏လေ့လာရေး Vela Pulsar ကိုခေါ်နှင့်ဤစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာဝတ္ထုများ၏အတွင်းစိတ်ပြုပြင်ခြင်းရှင်းပြဖို့ကူညီပေးနေစဉ်မိမိအပြုအမူကရှင်းပြသည်။
နျူထရွန်ကြယ်လည်ပတ်စေရန်လျင်မြန်စွာလှည့်, သူတို့ရဲ့လည်ပတ်အတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်တသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်နှုန်းသည်။ သို့သော်ချို့ယွင်းကြယ်များပျောက်ကွယ်သွားသောအခါသူတို့ပိုမြန်လည်ရန်စတင်နှင့်ဤဖြစ်ပျက်အဘယ်ကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။
ဒါဟာပုံမှန်ကဤပြဿနာများ, တိုင်းနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုနှစ်နှင့် 2016 မတိုင်မီသတိမမူခဲ့သဲလွန်စပါရှိသောသည်သူ၏နောက်ဆုံးပေါ်ပြဿနာများ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်ခြင်းကိုသည်းခံကြောင့် Vela Pulsar သုတေသီများများအတွက်ချုပ်ပစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဒေတာသည်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံထုတ်ဖော်, ကြယ်အတွင်းပိုင်းကြည့်ယူသိပ္ပံပညာရှင်များ enabled ပါပြီ။
သူတို့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက် မှစ. , သုတေသီများကြယ်နျူထရွန် superfluid အတွင်း၌တစ်ဦး "ဟင်းချို" ကိုဖုံးအုပ်နေတဲ့အစိုင်အခဲပြင်အပေါ်ယံလွှာအပါအဝင်သုံးသီးခြားအစိတ်အပိုင်းများရေးစပ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုနျူထရွန်၏ဤဟင်းချိုတစ်အလွှာကမ္ဘာအပေါ်ယံမြေလွှာများ၏အတွင်းပိုင်းဆန့်ကျင်တွန်းသောအခါ, ကြယ်ပွင့်ပိုမြန် run ဖို့စတင်ကြောင်းရှင်းပြသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် "overshoot" ဒီဖြစ်စဉ်ကိုခေါ်ပါ။ ယင်းနောက် superfluid ၏ဒုတိယလှိုင်းကပိုပြီးတည်ငြိမ်ပြည်နယ်မှအရာတို့ကိုယူဆောင်လာသည့်ပထမဦးဆုံးရင်ဆိုင်။
ဤသည်တွေ့ရှိချက်နျူထရွန်ကြယ်များနှင့်ဆက်စပ်သည့်ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောယခင်သီအိုရီနဲ့ကိုက်ညီ။ အခြားမေးခွန်းတစ်ခုကိုစဉျးပေါ်ပေါက်: Vela အတွက်ဖြစ်ပွားခြင်းမှပြဿနာမတိုင်ခင်ကြယ်၏လည်ပတ်တစ်ခုပင်ပိုမိုမြန်ဆန်အရှိန်အဟုန်မှာအရှိန်မြှင့်ရှေ့တော်၌နှေးကွေးပုံနှင့်ဤ "ကိုထေမိ" မူရင်းတစ်အခန်းကဏ္ဍကိုဘယ်လိုပြောရခက်ခဲသည် ထိုပြဿနာအတွက်, ဒါပေမယ့်သိပ္ပံပညာရှင်များဖွယ်ရှိ related နေကြသည်။
Image ကိုအကြွေး: တိုရွန်တို / M.Durant ၏နာဆာ / CXC / တက္ကသိုလ် et al; optical: function ကို / David De မာတင် DSS
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဤကြီးမားသောဂြိုဟ်သိမ်ဆက်ဆက်သေး ... ကမ္ဘာမြေကိုဖျက်ဆီးတော်မည်မဟုတ်ကြောင်းပြော - BGR
ကလေးဂျူပီတာရှိပါတယ် 4,5 ဘီလီယံအထိနှစ်ပေါင်းတစ်ဦးဂြိုဟ်ခြင်းဖြင့်ဝင်တိုက်ခဲ့သည် - BGR
Khabib Nurmagomedov Sentil Mohamed ဗီဒီယိုပြသနာများ - ဗွီဒီယို
မမျှော်လင့်သောစုံတွဲသတိပေးချက် Lily Allen သည်လမ်းမအလယ်၌ Stranger Things ၏ကြယ်ပွင့်ဖြစ်သော David Harbour ကိုနမ်းသည်
ဘုရင်မနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား - မည်သည့်ဘုရင်မသည်ရုပ်မြင်သံကြားတွင်ကြည့်လိုသည်ကိုနှစ်သက်သနည်း။ သူမကဒီမော်ကွန်းဒရာမာကိုခစျြအဖြစ်
အိန္ဒိယ - Abdul Kalam မွေးနေ့ - လူသား - ဒုံးကျည်၏ဘဝကိုပုံသွင်းပေးခဲ့သောဆရာများ | အိန္ဒိယသတင်း
VIDEO - အ 6h30 15 2019 အောက်တိုဘာလ log
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်6,021
TECH & Telecom2,376